အနက်ရောင် အမိုက်စားဖက်ရှင်လေးနဲ့ အထာ ကျကျ မိမိုက် လှလွန်းနေတဲ့ မေမြင့်မိုရ် – Shwe Sar
အနက်ရောင် အမိုက်စားဖက်ရှင်လေးနဲ့ အထာ ကျကျ မိမိုက် လှလွန်းနေတဲ့ မေမြင့်မိုရ်
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ မင်းသမီးချောလေးမေမြင့်မိုရ် က MRTV-4 ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲတွေထဲကနေပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရင်း အောင် မြင်မှုတွေ ရရှိကာ ပရိသတ် တွေရဲ့ အချစ်တွေကို အပြည့်အဝရရှိခဲ့ပါတယ်။မေမြင့်မိုရ် က သူမတူတဲ့အလှတရားတွေ အပြင် ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ အပြုံးလေး တွေကို ပိုင်ဆိုင် ထားရှိသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာ ခဏ ဆိုရင်လည်း မေမြင့်မိုရ်က ပရိသတ်တွေအတွက် သူမရဲ့ လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်လေး တွေကိုလည်း ဖော်ပြပေးလေ့ ရှိပါတယ်။
။မေမြင့်မိုရ် ကတော့ ” Happy New Year 2021 မှာ မေကိုချစ်တဲ့ Maymilyလေးတွေ Surpriseလက်ဆောင်လေး တွေပို့ပေးလို့ အရမ်းကို ပျော်ရွှင်ရတဲ့ နှစ်သစ်လေး ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်
ပို့ပေးတဲ့ အမှတ်တရ လက်ဆောင်လေးတွေကိုလဲ အရမ်းကြိုက်သ လို တန်ဖိုး ထားပါ့ မယ်နော် Maymily လေးတွေ အတွက် နှစ်သစ်မှာ အများကြီး ပိုကြိုးစား ပါ့မယ်နော် လို့ Promise မေ့ကို ပို့ပေးတဲ့ စာလေးကလဲ အရမ်း ရေးတတ်လွန်းလို့ ဒီမှာ ကြွေနေရပါပြီနော်Maymily လေးတွေရေ မေလဲ မေရဲ့ Maymily လေးတွေ ကိုအရမ်းချစ်ပါတယ်လို့ . . . ချစ်တဲ့ ‘မေ’”ဆိုပြီး ရေးသားဖော်ပြထားတာကို ချစ်ပရိသတ်ကြီးအတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက် ပါတယ်။
Source : May Myint Mo’s fb account
ပရိတျသတျကွီးရေ မငျးသမီးခြောလေးမမွေငျ့မိုရျ က MRTV-4 ရုပျသံဇာတျလမျးတှဲတှထေဲကနပေါဝငျသရုပျဆောငျရငျး အောငျ မွငျမှုတှေ ရရှိကာ ပရိသတျ တှရေဲ့ အခဈြတှကေို အပွညျ့အဝရရှိခဲ့ပါတယျ။မမွေငျ့မိုရျ က သူမတူတဲ့အလှတရားတှေ အပွငျ ဆှဲဆောငျမှု ရှိတဲ့ အပွုံးလေး တှကေို ပိုငျဆိုငျ ထားရှိသူပဲ ဖွဈပါတယျ။ မကွာ ခဏ ဆိုရငျလညျး မမွေငျ့မိုရျက ပရိသတျတှအေတှကျ သူမရဲ့ လှုပျရှားမှုပုံရိပျလေး တှကေိုလညျး ဖျောပွပေးလေ့ ရှိပါတယျ။
။မမွေငျ့မိုရျ ကတော့ ” Happy New Year 2021 မှာ မကေိုခဈြတဲ့ Maymilyလေးတှေ Surpriseလကျဆောငျလေး တှပေို့ပေးလို့ အရမျးကို ပြျောရှငျရတဲ့ နှဈသဈလေး ဖွဈခဲ့ရပါတယျ
ပို့ပေးတဲ့ အမှတျတရ လကျဆောငျလေးတှကေိုလဲ အရမျးကွိုကျသ လို တနျဖိုး ထားပါ့ မယျနျော Maymily လေးတှေ အတှကျ နှဈသဈမှာ အမြားကွီး ပိုကွိုးစား ပါ့မယျနျော လို့ Promise မကေို့ ပို့ပေးတဲ့ စာလေးကလဲ အရမျး ရေးတတျလှနျးလို့ ဒီမှာ ကွှနေရေပါပွီနျောMaymily လေးတှရေေ မလေဲ မရေဲ့ Maymily လေးတှေ ကိုအရမျးခဈြပါတယျလို့ . . . ခဈြတဲ့ ‘မေ’”ဆိုပွီး ရေးသားဖျောပွထားတာကို ခဈြပရိသတျကွီးအတှကျ ပွနျလညျမြှဝပေေးလိုကျ ပါတယျ။
Previous post ဆက်ဆီ ကျကျ အမိုက်စား ဖက်ရင်လေးနဲ့ စွဲမက်ဖွယ် ကောင်းတဲ့ အလှတရားတွေ ထင်ရှား ပေါ်လွင်နေတဲ့ နန်းမွေ့စံ
Next post အရုပ်မလေးလို့ ချစ်စရာ ကောင်းပြီး အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်း အလှတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သင်းရတီခင်